ပထမအကြိမ် အပျော်ခရီး စခန်းချသူများအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အရာ ၁၀ ခု - Hello Sayarwon
ပထမဆုံးအကြိမ် အပျော်ခရီးစခန်းချခြင်းသည် အမှန် တကယ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါသည်။ သို့သော် လည်း ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ ဖြစ်သည့်အတွက် အရေးပါ သောအရာများ ယူရန် မေ့နိုင်သည်။ အောက်ပါ ဆောင်းပါး တွင် ပထမအကြိမ် အပျော်ခရီး စခန်းချခြင်းအတွက် ယူရမည် ဖြစ်သော အကောင်းဆုံး အရာ ၁၀မျိုးကို ဖော်ပြထားပါသည်။
မြေပုံနှင့် သံလိုက်အိမ်မြှောင်သည် စခန်းချ အပျော်ခရီး အတွက် ယူရမည်ဖြစ်သော အရေးအကြီးဆုံး အရာများဖြစ် သည်။ သင်၏ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး စမတ် ပစ္စည်းများကို အလွန် အားမကိုးပါနှင့်။ တစ်ခါတစ်ရံ သင်သွားမည့်နေရာသည် လျှပ်စစ်မရနိုင်ပါ။ အင်တာနက်နှင့် ဖုန်းလိုင်းလဲ မမိနိုင်ပါ။
စခန်းချ အပျော်ခရီးတွင် သင်သည် အပြင်မှာနေရမည်။ ထို့ကြောင့် နေကာမျက်မှန် ယူကိုယူရမည်။ ပြင်းသော နေရောင်သာမက နှင်းများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော မျက်မှန် ကို ဝယ်ယူပါ။ နှင်း၏ အဖြူရောင်သည် နေရောင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး သင့်မျက်လုံးများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ နေလောင်ခံ ခရင်သည် မရှိမဖြစ်ယူရမည့်အရာ ဖြစ်သည်။
အပူ၊ လျှပ်စစ် ကာခြင်း
ရာသီဥတုကို အမြဲမခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အရေးကြုံ လျှင်သုံးရန် အဝတ်အစား အပိုယူလာပါ။
ရှေ့မီးခွက်၊ သယ်ယူ၍ရသော မီးအိမ်များနှင့် လျှပ်တစ်ပြက်မီးများသည် စခန်းချအပျော်ခရီတွင် ဘေးကင်း ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ရှေးဦးသူနာပြု ပစ္စည်းများ၏ အရေးပါပုံကို လူတိုင်းသိပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို အိမ်တွင် မထားခဲ့ပါနှင့်။
မီးခြစ်များ၊ မီးလောင်စေသော အရာများ အားလုံးသည် အရေးကြီးပါသည်။ တတ်နိုင်ပါက သင့် ခရီးတွင် အခက်အခဲ များ မဖြစ်အောင် ရေစိုခံသော ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပါ။
ဓါးများ၊ ဘက်စုံသုံး ပစ္စည်းများ၊ ရေစိုခံတိပ် ( ဘက်စုံသုံး ပြင်ဆင်သည့်အရာ ဟုလည်း ခေါ်သည်) သည် ပစ္စည်းများ ပြင်ရာတွင်၊ အစားအစာများ ပြင်ဆင်ရာတွင် အလွန် အသုံး ဝင်သည်။ ရှေးဦးသူနာပြု ပစ္စည်းများသည်လည်း အရေးပေါ် အခြေအနေကို အချိန်မီ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
အာဟာရ ( အပို အစားအစာများ)
အပို အစားအစာများ အမြဲထည့်လာပါ။ သင်သွားသော နေရာ အနီးအနားတွင် အစားအစာ ရချင်မှရမည်။ အစာများ ကို ရေစိုခံ ဘူးများဖြင့် ထည့်ယူခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်များစွာ ရသော အစားအစာများ ဥပမာ- ချောကလက်၊ ခွန်အားဖြင့် အချိုရည်များ၊ သစ်သီး အခြောက် များ၊ အခွံမာသီးများ ကို ရွေးချယ်ထည့်ယူပါ။
ရေဓါတ်ဖြည့်ခြင်း ( ရေအပို)
သင်သွားသည့်နေရာတိုင်း အနည်းဆုံး ရေ တစ်ဘူး ယူသွားပါ။ ရေစစ် သို့မဟုတ် ဓါတုကုသမှု ရှိပါက ပိုကောင်းသည်။
အမိုးအကာများသည် အရေးပါသည်။ စခန်းချသူ အများစု သည် ခရီးအတွက် ရွက်ဖျင်တဲများကိုသာ ယူကြသည်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ အရေးပေါ် အမိုးအကာသည် သင်၏ စာရင်းတွင် ပါဝင်သင့်သည်။ ရာသီဥတု ဘယ်လိုပြောင်းမည်ကို သင် မခန့်မှန်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်လမ်း ပျောက်သွားပါက အိပ်စရာ၊ အနားယူစရာ တစ်ခုခု မရှိလျှင် ကြောက်မက်ဖွယ် ဖြစ်သည်။ သင်သည် သဘာဝနှင့် ထိတွေ့ရပြီး အကိုက်ခံရနိုင်၊ အစားခံရနိုင် သို့မဟုတ် အတုတ်ခံရနိုင်သည်။
ခရီးစဉ်တွင် အပြည့်ပျော်နိုင်ရန် အထက်ပါ မရှိမဖြစ် အရာ ၁၀ ခုကို သတိရပါ။
10 Classic Health and Safety Risks Among First-Time Campers.http://health.usnews.com/wellness/slideshows/10-classic-health-and-safety-risks-among-first-time-campers?slide=2Accessed March 22, 2017
The Ten Essentials. https://www.rei.com/learn/expert-advice/ten-essentials.htmlAccessed March 22, 2017
10 Safety Tips for First-Time Campers. http://www.active.com/outdoors/articles/10-safety-tips-for-first-time-campersAccessed March 22, 2017